आज पनि जीवित छन् शिवका यी २ अवतार ! यसको पछाडिको डरलाग्दो कथा - Mitho Khabar
June 2, 2022 mithokhabarLeaveaComment on आज पनि जीवित छन् शिवका यी २ अवतार ! यसको पछाडिको डरलाग्दो कथा
पृथ्वीमा दुष्टता नष्ट गर्न, धर्म स्थापना गर्न भगवान अवतार लिनुहुन्छ। भगवान विष्णु र भगवान शिवले पनि धेरै अवतार लिएका छन्। कलियुगमा भगवान शिव र विष्णुका अवतारहरू पनि शास्त्रहरूमा वर्णित छन्। कलियुगमा भगवान विष्णुले कल्किको रूपमा अवतार लिनुहुनेछ। जबकि भोलेनाथका २ अवतार अहिले पनि यस धर्तीमा छन् ।
एउटा अवतारको पूजा हुन्छ, अर्कोलाई श्राप दिइन्छ
भगवान शिवका यी २ अवतार हुन् हनुमान र अश्वथामा, महाभारत युगका योद्धा। यिनीमध्ये हनुमानको पूजा गरिन्छ भने अश्वत्थामाको बारेमा भनिन्छ आज पनि घना जंगलमा कतै घुमिरहने गरेको छ । वानरराज केसरीकी पत्नी अञ्जनीको गर्भमा हनुमानको जन्म भएको थियो भने अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्यको घरमा जन्मेका थिए। यसका लागि डोनाचार्यले कठोर तपस्या गरेका थिए र शिवसँग आफूलाई पुत्रको रूपमा जन्मियोस् भनी वरदान मागेका थिए। त्यसपछि सावन्तिक रुद्रको अंशबाट अश्वत्थामाको जन्म भयो।
माता सीता अमर हुन आशीर्वाद दिनुभयो
जब पवनपुत्र हनुमान सीतालाई खोज्न सम्पूर्ण समुन्द्र पार गरेर लंका पुगे, सीता माताले उनलाई अमर हुने आशीर्वाद दिनुभयो। त्यसैले हनुमान जी जीवितै छन् र उहाँका भक्तहरूको संख्या अनगिन्ती छ भनिन्छ।
अश्वत्थामालाई श्राप थियो
महाभारत युद्धमा कौरवहरूको पराजय हुँदा अश्वत्थामाले पाण्डवका पाँच छोराहरूलाई राती सुतिरहेको अवस्थामा मारेका थिए। उत्तराको गर्भ नष्ट गर्न ब्रह्मास्त्रको प्रयोग पनि भयो। यसबाट क्रोधित भएर भगवान श्रीकृष्णले अश्वत्थामालाई श्राप दिए कि तिमी पृथ्वीमा अनन्तसम्म बाँच्नेछौ र भटकरहनेछौ ।
तारा एयर दुर्घटना : मृ’तकको रीतिरिवाज अनुसार अन्त्येष्टि गरियो